Doug, စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ Ajax Planet မှာဒီမကောင်းတဲ့လူတွေအကြောင်းငါတို့ကိုပြောဖို့မင်းရဲ့ carpal tunnel ကိုလွင့်ပစ်လိုက်ရတယ်။ ငါထင်, လူအစုအဝေး၌ hecklers ရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါ။ ဒါသူလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့မင်းလုပ်နေတာကိုဆက်လုပ်ပါ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမှလှုံ့ဆော်မှု!
ငါထင်တာကတော့ဒီနေရာမှာ wannabe အနိုင်ကျင့်သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာ“ အမည်မသိ” ဖြစ်နေလို့ sh *** ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးပြီးနှိုးဆော်နိုင်တယ်။ တချို့လူတွေကကိုယ့်မြည်းဖြစ်ခြင်းကိုချွတ်ရ *** s ။ ကျွန်တော်ကြည့်ရတာသူတို့ကသနားစရာ၊ အထီးကျန်တဲ့သတ္တ ၀ ါတွေ၊ တုန့်ပြန်မှုတွေ၊ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
ထောက်ပံ့မှုအတွက် Pat နှင့် CJ ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Carl! သင်၏ထောက်ခံချက်အပေါ် မူတည်၍ CC လိုင်စင်သည်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေကိုထည့်သွင်းထားသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကဒီတိုးပွားလာလမ်းကြောင်းသစ်ကိုလှည့်ပတ်သွားမယ့်အခါငါတွေးမိခဲ့သည်။ မင်းရဲ့တံဆိပ်ကိုငှားပြီးတခြားသူတွေဆီကိုငါပို့မယ် ထို့ကြောင့် CC လိုင်စင်ကိုမမေ့ပါနှင့်😉
ငါတို့အားလုံးမင်းကိုချစ်လားမြည်းအချို့ကိုရိုက်ဖို့လိုလား၊ ငါ့ကိုသိရင်ငါလုပ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားတွေရှာတွေ့မယ်။ ငါလုပ်နိုင်ပေမယ့်မကြာ